क्यानिंग | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मलाई भन्नुहोस् कि कसरी अन्डा पाउडर बनाउने, र यसलाई भण्डार गर्ने, यसको पोषण मूल्य ठूलो छ ???
मलाई भन्नुहोस् कसरी अण्डा पाउडर बनेको छ, र यसलाई कसरी भण्डार गर्ने, यसको पौष्टिक मूल्य ठूलो छ ??? एक लक संग एक वैक्यूम झोलामा भण्डारण गर्न सकिन्छ। कफी जस्तै। वा कडा ढक्कनको साथ एक गिलास जार, ...
उत्तम कोबरा व्यञ्जनहरु !!!
सर्वश्रेष्ठ कोब्रा व्यंजनहरु !!! Horseradish यो हार्स्रेडिश केवल एक चिसो, अँध्यारो ठाउँमा भण्डार गर्न सकिन्छ, यो सबै जाडो खडा हुनेछ। टमाटर १ किलोग्राम। लसुन १०० जी.आर. हार्स्रेडिश १०० जीआर नुन १-२ चम्मच , ...
मलाई सर्दमा माइनरिंग को लागि एक सिद्ध नुस्खा बताउनुहोस्।
मलाई जाडोको लागि मह agarics अचार को लागी एक प्रमाणित नुस्खा बताउनुहोस्। MUSHROOMS को लागि MARINADE (मौरी मशरूम, बोलेटस, सेतो, आदि) १ लिटर पानी; २ चम्मच। l सहारा; T चम्मच नुन ... ...
3 ज्योतिमा कति स्वादिष्ट स्वाद बोसो। बैंक?
Lit लिटामा नुनको लर्डरमा कत्ति स्वादिष्ट हुन्छ। बैंक? नुन, मरिच - रातो र कालो, लसुन / लौंग / नुनको साथ सबै कुरा, दाउरा / ताजा / मिश्रणको साथ रगड़्नुहोस् - र जारमा - ...
जाडोको लागि सुँगुर कसरी निस्कन्छ?
कसरी जाडो को लागी Sorrel फ्रिज गर्न? कसरी जाडो को लागि sorrel तयार गर्न: त्यहाँ जाडो को लागी sorrel तैयार गर्न को लागी धेरै तरिकाहरू छन्। पहिलो ठण्ड हो। Sorrel स्थिर गर्न, यो कुल्ला। काट्नुहोस् र राख्नुहोस् ...
मान्छे! चन्द्रमा को कुन चरणमा तपाईलाई सौरक्र्राट बनाउन आवश्यक छ? अग्रिम धन्यवाद!
केटाहरु! चन्द्रमा को कुन चरण मा तपाईं गोभी किण्वित गर्नुपर्छ? अग्रिम धन्यवाद! कस्तो लाज! र म कहिल्यै चन्द्रमातिर हेर्दिन, किनकि म बन्दकोबीलाई उठाउँछु। अक्टुबरको अन्तमा पनि मैले एक पेय पाए ...
हजुरआमा संग कचौरा कचौरा काली मिर्चको लागि नुस्खा कसलाई थाहा छ। वास्तव मा एक नुस्खा को आवश्यकता हो।
कसले महको साथ अचारको तानको मिर्च को लागि नुस्खा को थाहा छ। मलाई वास्तवमै एक नुस्खा चाहिन्छ। कटु मिर्च धुनुहोस् र मिनेट को लागी उबलते पानी खन्याउनुहोस्। १०-१-10 पानी खसाल्नुहोस्, काली मिर्चलाई एक भाँडोमा हाल्नुहोस् र साधारण सिरकाको साथ खन्याउनुहोस् ...
मैले पढें कि खीर जमेको हुन सक्छ। के कसैले कोसिस गर्यो? के भयो? Defrosting पछि कसरी प्रयोग गर्ने?
मैले पढें कि काँक्रा स्थिर गर्न सकिन्छ। के कोहीले यो प्रयास गरेको छ? के भयो? कसरी Defrosting पछि प्रयोग गर्ने? उबलते जस्तै। यो रमाईलो लाग्दैन र यसको जस्तो देखिन्छ स्वाद। म पहिले नै काँक्रालाई फ्रिज गर्दैछु ...
Kvass कोबी कसरी नुन गर्न?
कसरी Sauerkraut सही नुनिलो? भाँडाको बन्दकोबी, एउटा क्यानमा मार्कोभ रगेर, सलाद भन्दा थोरै नुन (तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ) किण्वनको लागि थोरै चिनी थप्नुहोस्, पुदीना मुनि गोभीलाई मिलाउनुहोस् ...
जापानी क्वेन्सनबाट कस्तो स्वादिष्ट पकाउन सकिन्छ?
तपाईं जापानी टाउकोबाट कस्तो स्वादिष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ? जापानी क्विन्जबाट जाम १ किलको क्विन्ज, १. sugar१..1 किलोग्राम चिनी, ११..1,31,5 कप पानी। आधा मा फल काट्नुहोस् (यदि स्लाइसमा ठुलो भने), बीउ सफा गर्नुहोस् ...
नाइट्रेट के छ र यसलाई कहाँ पुग्छ? उनीहरूलाई मासु खाँदा सबै व्यञ्जनहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
साल्टेपाटर भनेको के हो र म यो कहाँ पाउन सक्छु? यो नुनिलो मासु को लागि सबै व्यंजनहरु मा उल्लेख छ। साल्टेप्टर (खाना) संरक्षक यसको रंग कायम राख्छ खाद्य उद्योग मा हम्स र सॉसेज को तयारीको लागि प्रयोग गरीन्छ ...
स्याउ सुखार्नको लागि आधारभूत नियमहरू के हुन्? कसले के गर्छ? एक विशेष ड्रायर खरीदा, र उनी तिनीहरूलाई 12 घण्टा डुबाउँछन्। के यो सामान्य हो?
स्याउ सुकाउनका लागि आधारभूत नियमहरू के हुन्? कसले के गर्छ? हामीले विशेष ड्रायर खरीद गर्‍यौं, र यसले उनीहरूलाई १२ घण्टा सुकाउँछ। यो सामान्य हो? हामी ओभनमा १२ घण्टासम्म सुख्खा हुँदैनौं, तर ...
शराब, हप्ता वा2कति पटक खेल्नुपर्छ
वाइन कति समयसम्म खेल्नुपर्दछ, एक हप्ता वा २ यो सबै दुई हप्तासम्म लुगाको साथ पालनपोषणको कठोरतामा निर्भर गर्दछ - तनाव, बोतलहरूमा खन्याउनुहोस्, चिनी र कर्क थप्नुहोस्, राख्नुहोस् ...
कसरी टिन खोल्न सक्छ यदि कुनै ओपनर र चाकू छैन भने
कसरी एक टिन खोल्न सकिन्छ यदि त्यहाँ ओपनर र चक्कु छैन भने १ यदि तपाईंलाई शीशाको भाँडो खोल्ने समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ... तपाईंको आफ्नै कुहिनो संग। हो, यसलाई ध्यान दिएर गर्नुहोस्। राख्नुहोस् ...
भविष्यको लागि कसरी बोसो छान्नु हुन्छ? कुनै पनि तरिकामा बैंक र रोल गर्ने, नुस्खा सम्झनुहुन्छ?
भविष्यमा प्रयोगको लागि कसरी लार्ड गर्ने? केहि क्यान र रोल अप मा, कसलाई सम्झना सम्झना? म डिब्बाको तल एक सानो नुन खन्याउँछु। मैले प्लेट वा कचौरामा नुन राख्दछु, जसमा अनुसार तपाईले मसला थप्न सक्नुहुन्छ ...
घरमा कोड लिभर तयार गर्ने?
घरमा कड लिभर कसरी तयार गर्ने? मैले सफा धुईएको कलेजो र तौंलीमा अनावश्यक सबै चीजको सफा गरें र पानीबाट छुटकारा पाउनको लागि अरूसँग यसलाई कभर गरें, त्यसपछि म भुइँ लिन्छु ...
कसरी घर मा सैलून उठाओ?
घरमा सालुनलाई नुन कसरी दिने? जैतून वा दुबला तेलको साथ सामनको तयार टुक्राहरू फैलाउनुहोस् (यो कम फ्याट टाढा जानको लागि हो) चिनीको एक भाग र नुनको दुई भागहरू मिक्स गर्नुहोस् ...
किन sauerkraut रस "snotty" भयो? के म केहि ठीक गर्न सक्छु वा म बन्दकोबीलाई बाहिर फाल्न सक्छु?
किन sauerkraut रस "snotty" भयो? के म केहि ठीक गर्न सक्छु वा म बन्दकोबीलाई बाहिर फाल्न सक्छु? किन बाहिर फालौं? तपाईं योबाट हजपज फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ, स्वादिष्ट! ठीक छ, सबै भन्दा पहिले, तपाईं शायद प्रयोग गर्नुभयो ...
मलाई हरी टमाटरको लागि उत्तम नुस्खा बताउनुहोस्।
मलाई हरियो टमाटर टिप्ने उत्तम विधि बताउनुहोस्। मलाई यी टमाटरहरू मात्र मन पर्छ। हरी टमाटर को बारे मा १० किलोग्राम - लसुन को टाउको १० टस
के कसैले कसैलाई निर्वाचित पार्छ?
के कोहीले भ्याक्युम क्याप्सहरू प्रयोग गरीरहेछ? विज्ञापनको लागि नेतृत्व पनि। पैसा भर्खरै फ्याँकियो! यी ढक्कनहरू फ्रिजमा तुरुन्तै खोलिन्छन्। र घर भित्र, आधा घण्टा भन्दा बढी। यो एक र्यागको साथ भाँडो कभर जस्तै छ। ...
83 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,577 प्रश्नहरू।